1.1 1. Աչքի Սավիր Սավիր
2.2 2. Shirkadaha saamileyda ա
Waxay yihiin wax aad rabto oo isticmaali karto;
Markaad akhristayaashaada koraan si ay kuugu aammaanaan, waxaad dabiici ahaan dooni doontaa inaad kugula taliso waxyaabo waxtar leh iyaga. Haddii ay jiraan badeeco, adeegyo ama xitaa meelo aad horay ugu riyaaqdey oo ku habboon tiiyoo aad blogka diirada saareyso, tag oo qor gabal ku saabsan. Markaad sidaa Sameysid, adiga waa saameyn – waa sida ugu fudud ee.
Abuuri boosto blog ah oo kugula taliya alaabta iyo isku xirnaanta xiriiriyahaaga barnaamijyada sida Barnaamijka iskaashiga Amazon, Xubinta Guddiga կամ La qaybso iibka: Fikradaha waxaa ka mid ah hagaha hadiyadaha fasaxyada, cuntooyinka ay ku jiraan maaddooyinka xiriirka la leh, safarada socdaalka, qalabka daabacaadda bogga, martigelinta, blogska, ama "waa inay lahaadaan" xaalladaha ku jira waxyaabaha sida tiknoolajiyada sare, muuqaalka xilliga ama dib u noqoshada alaabta dugsiga.
Tusaale ahaan waa tilmaame hadiyado ah oo aan u abuuray akhristayaasha aan ugu dambeeyay ee Noorway (arag sawir sax ah): Hagaha hibada ayaa aad u weyn sababta oo ah markaad koreyso, waxaad ka qaadi kartaa shirkadaha inay kaqaybqaataan hagahaaga.
Waxyaabo kale oo gaar ah oo aad u wanaagsan oo dib-u-eegis iyo kor u qaadaya waa adeegyo martigelinta webka. Waa maxay sababta? Sababtoo aa waa մոմ "ժիլիկսան" oo leh baahi weyn – qof kasta oo doonaya inuu joogsado առցանց wuxuu u baahan yahay martigaliye websaydh. Waxaad u baahan tahay oo aad isticmaashaa կեսին: Sidaas- ն առաջացրեց maaha Dib u eeg hoygaaga internetka?
1. Աչքի Սավիր Սավիր
Hadday tahay shey wax lagu karsado, tus sheyga iyo saxanka ka dhashay ee aad abuurtay. Haddii aadan sawir fiican ka qaadan Կարին, weydiiso macmiilka sawir ka – ka fiican inaad haysato մոմ u muuqda մոմ aan fiicnayn haba yaraatee laakiin waa inaad barataa inaad u qaaddo sawirro macquul ահ OO macquul ահ .. si ՀԶԳ Hal abuur Ugu hesho adeegga.
Sawirka hoos ku qoran waa dib-u-eegis loogu talagalay buugaagta "Սառեցված." Ogeysiis aan haysto sawirro badan oo macquul ah, sidaa darteed waxaan ku soo celin karaa wakhti ka dib, oo bedelaya guddida garabka iyo mawduuca mar kasta oo aan Sameeyo.
Tusaale kale – Haddii aad fiiriso Jerry’s Dib-u-eegida InMotion – Wuxuu isticmaalaa tiro qiimo leh oo ku daraya sawirada iyo jaantusyada si uu u buuxiyo qoritaanka.
Erey xasuusin leh: noqo daacad! Ha ku shubin walxo; Fiiri waxyaabaha wanaagsan ee aad ku riyaaqday ee ku habboon ololaha calaamadda haddii ay suurtogal tahay ama haddii kale suura gali karto xaqiiqooyinka. Isku day sidii aad wax u soo bandhigtey intii aad awoodi kartid oo aad xoojisid wax kasta ooad and jeceshahay.
Shir sanad gudihiis ah, waxaan kaga qeybgalay Q&A oo ay weheliyaan koox magac ku yaal. Qaadashada muhiimka ah waxaan ka bartay wakiil wakiil ah taasi waa waxba waa mid heer sare ah. Haddii aad ku qorto 100% dib-u-eegis wanaagsan, qofna kuma rumaysan doono, luminaayo luminta.
Ha ka baqin inaad tilmaamto cilladaha sheyga / adeegga – xitaa haddii lacag laga siinayo shirkadda. Waa tan shaashada laga qaado Dib and eegista Jerry’s SiteGround – xusuuso cilladaha uu ku tilmaamay dib u eista.
Markaad liis gareysid waxyaabaha wanaagsan iyo cilladaha, waxaad siin kartaa fikraddaada guud – inaad noqotaa mid hal abuur leh sida aad jeceshahay. Samee nidaam qiyaas ah, wuxuu siinayaa suulka ugu sareeya, muuji ilmaha ilmo dhoola – մոմ կաստա oo adiga kuu fiican.
Xeerarka FTC waxay kaa rabaan inaad sheegto markaad բլոգերներ ku jirto մոմ KASTA OO nooca lacag celinta, օօ այ ku jirto lacag caddaan օհ, bilaash AMA qiimo dhimis օհ, rasiidh, shahaadooyin hadiyadeed, gelitaanka shirarka / dhacdada ամա nooc KASTA OO lacag bixin օհ.
Isticmaal fayaqabka haboon si aad u soo bandhigto warbaahinta bulshada. Waxaan isticmaalaa "#Հայտարարություն" ee posts iyo warbaahinta bulshada sida ay u gaaban tahay oo sahlan tahay in lagu xiro meel kasta. Waxaad ku dhejin kartaa boostadaada, "Waxan soo iibsaday alaabtan si dib-u-eegis ah, laakiin fikradaha oo dhan ayaa aniga ii ah," alaabooyinka aad heshay lacag la’aan.
Ugu dambeyntii- ն ուներ iyo jeer doorta- ն "մայա ադիգուն" ku xirneyn xidhiidhadaada, xiriiriyahaaga ama wax kale. Haddii uu calaamadku diiday inuu aqbalo tilmaan-bixintaas, ka tag.
Tusaale ah kafaalo-qaadasho oo ku xusan horey iyo u dhawaansho alaabada. Waxaa ku jira "#Հայտարարություն" ee cinwaanka kor u qaadista warbaahinta bulshada.
Waxaa laga yaabaa in laguu soo bandhigo kuuboonada halkii alaabtu bilaabi lahayd. Meelahaaga ku soo dhawow sababta ay dhagaystayaashu u habboon yihiin, sida ay uga jawaabi doonaan badeecada iyo waxa aad u qaban doonto. Waxaad iska dhigtaa inaad ku qoreyso daboolid codsi shaqo!
2. Shirkadaha saamileyda ա
Suuqgeynta saamileyda ah waa warshad horumarineed oo waxay noqotey il muhiim ah oo ah dakhliga internetka loogu talagalay hooyooyinka badan (oo ay ka mid yihiin kuwa kale) բլոգերներ: Badeecada shirkadda waxay kor u qaadaa alaabta ama adeegga la raaci karo iyada oo la adeegsanayo xirmooyinka, nambarada, lambarrada taleefoonka, iwm, taas oo adiga kuu gaar ah. Kadibna waxaad kasbataa qayb ka mid ah dakhliga marka uu iibku dhaco iyada oo loo marayo xiriirkaaga gaarka ah.
Shabakad xiriiriye ah ayaa badanaa ah mashruuc dhexdhexaad ah oo u dhaxeeya shirkad iyo shirkado ganacsi. Waa qayb ka mid ah isla’egta suuq-geynta shirkadda oo u egtahay in ay ka baxdo, maadaama shirkadaha badankood wax ka qabtaan badeecooyinka / adeegyada tooska ah, laakiin wali waa xog muhiim ah oo lagu og.
Waxyaabaha cusub, waxaan ku talin lahaa Tomoson, kaas oo leh ololeyaal badan oo loogu talagalay baranbarayaasha leh dhagaystayaal yaryar. Shaqsi aanan, waxaan bilaabay inaan la soo baxo BlogPRWire iyo SheSpeaks. Waxaad sidoo kale is day day card MomSelect, Hooyo and Bloggy Moms.
Gugaantan ayaan ka qayb qaatay Waqtiga Ciyaarta majaladda Dhacdada alaabada blogger ee Magaalada New York, halkaas oo shirkaduhu ku soo bandhigaan waxyaabo cusub oo lagu sii daayo iyo demos markay uruurinayaan waaaaaaaaaa Dhacdooyinka noocan ah caadiyan waa casuumad keliya, waana sababtaas ay lacag ugu bixiso inay iska diiwaangeliso kooxda blogger-ka maxalliga ah, oo la mid ah taaga. Laba kooxood oo aan ka tirsanahay waxaa ka mid ah Philly Social Media Moms iyo Green Sisterhood. Waxaan wadaagnaa munaasabadaha, dallacsiinta, fursadaha, talobixinta xirfadda leh waxaanan sare u qaadnaa midba midka kale boggiisa.
Marka a tikidhada kuu qabato, raac tilmaamaha codsiga dib u eegista.
Haddii ay codsadaan wax aan macquul ahayn, diidi inta aadan bilaabin. Sumcad leh, sumadaha blogger-savvy waxay kuu soo diri doonaan xiriiriyeyaal boggooda halkii ay ka isticmaali lahaayeen xiriirada qoraalka ee spammy. Ballan qaad aasaaska – tusaale ahaan, erayga ‘500 word post’, wadaagida Facebook & Twitter – ka dibna gaarsiiya waxyaabo dheeri ah, sida wadaagid dheeri ah ama pinning. Had iyo jeer calaamee sumadda markaad kobcinayso faallooyinkaaga.
Dadka wax qora qora ma lacagbaa?
Tusaale: Heerka beddelka 2.5% iyo kasbashada $ 100 beddelid kasta, waxaad $ 2,500 ka samayn doontaa 1,000-kii taraafik.
Բլոգերներ, որտեղ դուք ցանկանում եք այցելել ձեր օրագիրը, ինչպես նաև այն բլոգը: Mid ka mid ah qaababka ugu caansan waa iyada oo loo maro warbaahinta bulshada, halkaas oo waxyaabo aad u tiro badan ay ka faa’iidi karaan wadaagista bulshada. Bilow ahaan, waad u tixraaci kartaa tan 5 istiraatiijiyad aasaasi ah oo lagu kobcinayo akhriska bartaada.
Այստեղ դուք կարող եք գտնել ևeraad ah – Blogger am Youtuber- ում?
Hadda, waa waqtigii aad ku boodi lahayd ooadad bilaabi lahayd. Ku celceli waxyaalaha aad jeceshahay oo u isticmaal warbaahinta bulshada si aad u dardar geliso qoraaladaada, adoo ku dheji sumadda aad u magacowday. Kaliya ha istaagin hal ama laba qoraal – adkaysigu waa fure. Hagaajinta boogahaaga, haddii aad cusub tahay – la wadaag boggaaga saaxiibada iyo xubnaha qoyska si aad u bilowdaan, bartaan oo hirgeliyaan SEO wanaagsan, oo sii daabac waxyaabaha wanaagsan.
Waxaad samayn kartaa tan. Jerry Low, oo ah milkiilaha boggan, wuxuu bilaabay WHSR oo keliya bogga dib u eegista martida. Դուք կարող եք այցելել ձեր կայքը – WebHostingSecretRevealed.net (WHSR) wuxuu noqday mid ka ka mid ah goobaha ugu fiican ee martigelinta ee halkaas ka jira.